Raharaha vono olona :: Mitohy ny fikarohana an’ireo nitifitra lehilahy tetsy 67 Ha - ewa.mg
Raharaha vono olona :: Mitohy ny fikarohana an’ireo nitifitra lehilahy tetsy 67 Ha
News - Raharaha vono olona :: Mitohy ny fikarohana an’ireo nitifitra lehilahy tetsy 67 Ha
Tsy mbola nisy olona voasambotra na voatazon’ny polisy tamin’ny raharaha fitifirana lehilahy iray teny amin’ny 67 Ha, ny alatsinany 24 jona lasa teo. Tsy mbola niakatra teny amin’ny Fitsarana ihany koa ny valin’ny fanadihadiana. Mitohy ny fikarohana an’ireo lehilahy roa nanao ny herisetra. Olona vitsivitsy kosa no efa nohenoina, toy ny olona akaiky azy sy ny mpiara-miasa taminy.
Aorian’ireo rehetra ireo no hahafantarana ny zava-nisy marina na vono olona niniana natao noho ny lonilony sy valifaty, na fanafihana niharo halatra tsotra no nihatra tamin’ilay lehilahy voatifitra. Sady voatifitra teo amin’ny tratrany no mbola voaroba môtô sy kitapon’ity farany, tamin’io alatsinainy io. Avy nihinana lasopy tao amina toeram-pisakafoanana iray teny amin’ny 67 Ha izy no tra-doza.
L’article Raharaha vono olona :: Mitohy ny fikarohana an’ireo nitifitra lehilahy tetsy 67 Ha est apparu en premier sur AoRaha.
Nivoaka tamin'ny : 01/07/2019
Kaominina Fiaferana: nankasitrahana ireo mendrika tamin’ny fanadinam-panjakana
Tsy nijery fotsiny ireo mpianatra mendrika tamin’ny fanadinam-panjakana teo ny ben’ny Tanànan’i Fiaferana. Notolorana mari-pankasitrahana izy ireo, omaly.Nankasitraka ny mpianatra mendrika nitana ny laharana telo voalohany nandritra ny fanadinam-panjakana CEPE sy BEPC ary bakalorea ny ben’ny Tanànan’i Fiaferana, distrikan’Antananarivo Avaradrano, Andrianaho Ratovelomanana, omaly, teny amin’ny biraon’ny kaominina. Ireo mpiadina telo nisongadina tamin’ny fanadinana CEPE sy BEPC ary ny mpiadina iray nahazo Mention assez bien tamin’ny bakalorea no nahazo fankasitrahana sy medaly ary lelavola ho fisaorana azy ireo. « Fampirisihina ny mpianatra hanao ny tsara hatrany sy hiezaka amin’ny fianarana no tanjona. Hetsika sambany nisy nanao ny fankasitrahana toy izao », hoy ny ben’ny Tanàna. Mbola hidinika ny fanampiana ireo mpianatra sangany ireo amin’ny fanohizana fianarana ny mpitantana ny kaominina, araka ny fanazavany. 10 tamin’ny mpianatra 14 avy ao amin’ny lycée no nahazo ny mari-pahaizana bakalorea ho an’ny kaominina. Notolorana medaly koa izy rehetra afaka soa aman-tsara ireo. Nankasitrahana koa ny sekoly efatra nanana taham-pahafahana 100% tamin’ny CEPE farany teo. 16 ny isan’ny sekoly ambaratonga voalohany ao anatin’ny kaominina, telo ny ambaratonga faharoa ary roa ny lycée mandray ny mpianatra rehetra. Niantoka ny sakafon’ny mpiadina tamin’ny fanadinana CEPE ny kaominina ho fanampiana ireo ray aman-dreny.Vonjy A.L’article Kaominina Fiaferana: nankasitrahana ireo mendrika tamin’ny fanadinam-panjakana a été récupéré chez Newsmada.
Nanao tohivakana… Lozam-pifamoivoizana efatra indray nitranga ny faran’ny herinandro teo teny amin’ny lalam-pirenena faha-7 sy faha-5. Olona efatra namoy ny ainy. Ankoatra ireo ankizikely maromaro, tsy latsaky ny 10 ireo naratra.Fiara taksiborosy iray mampitohy ny Renivohitra sy i Fandriana no tra-doza, omaly antoandro tokony ho tamin’ny 12 ora sy sasany, teo Antemotra, avaratr’Ilempona, kaominina Antanifotsy. Hatramin’ny ora nanoratanay farany, olona miisa roa ny namoy ny ainy, ankizikely ny iray amin’izany. « Mbola nijanona nisakafo tao Ambohimandroso izahay talohan’ny tranga, tsy hita anefa ny mpamily ny fiara tamin’io fotoana io fa nandeha nisotrosotro », hoy ny tatitra voarain’ny Polisy ao an-toerana misahana ny fanadihadiana. Rehefa nanohy ny dia anefa, nirimorimo ny fiara. Niala ireo mpianatra teny amin’ny lalana handeha hody anefa ka nivadibadika tafavoaka ny arabe. Vokany, maty tsy tra-drano tamin’izany ny lehilahy iray mpandeha, 55 taona. « Vaky tanteraka ny lohany ka antony nahafaty azy teo no ho eo », hoy ny fanazavan’ny Polisy. Nambarany fa nahatratra 20 ireo naratra sy nalefa vonjimaika tao amin’ny hopitaly ao an-toerana. Isan’izany ihany koa ilay zazakely iray namoy ny ainy raha vao tonga tao amin’ny toeram-pitsaboana raha mbola tsy mahatsiaro tena kosa ny reniny. Ankizikely miisa efatra tao anatin’ny fiara naratra ka voatery nalefa any amin’ny hopitalin’Antsirabe. Voasambotra ilay mpamily tsy naratra ary tazonina vonjimaika ao amin’ny kaomisarian’Antanifotsy hanaovana fanadihadiana.Nahafatesana olona ihany koa tany amin’ny faritra IhorombeNy tolakandron’ny 20 jona 2020 teo koa, nisy lozam-pifamoivoizana teo anelanelan’i Betroka sy Ihosy. Voalaza fa mpiasan’ny Fahasalamana avy namita iraka tany amin’iny faritra atsimon’ny Nosy iny ireto tra-doza tampoka ireto ka namoizana ain’olona iray sy naharatrana mpiasan’ny minisiteran’ny Fahalasamana miisa efatra, ao anatin’izany ny mpamily ilay fiara 4×4. Araka ny vaovao voaray, efa afaka namonjy ny fodiany ireo telo naratra tamin’ity fiara tsy mataho-dalana ity raha mbola tsaboina ao an-toerana kosa ny olona iray hafa. Nieren-doza ny Pr Ratsimbazafy JonahNitrangana lozam-pifamoivoizana ihany koa tao Begoaika Soavina, atsimon’Antsirabe, lalam-pirenena faha-7 iny. Tra-doza tamin’izany ny Pr Ratsimbazafy Jonah sy ny mpamiliny, afakomaly hariva. Tsy nisy ny aina nafoy saingy potika ny fiara. « Raha ny fahitana ny fiafaran’ny fiara, mafy dia mafy ny dona nahazo azy… », hoy ny fanazavan’ny Pr Jonah tao amin’ny kaonty « facebook »-ny.Teny amin’ny lalam-pirenena faha-5Nitrangana lozam-pifamoivoizana mahatsiravina ihany koa teny amin’ny lalam-pirenena faha-5 mampitohy an’Antalaha sy i Sambava; ny alahady antoandro teo tokony ho tamin’ny 2 ora sy 50 minitra. Nifandona tamin’izany ny moto roa, teo Ambatofasika, 3 km tsy hidirana an’Antalaha. Maty tsy tra-drano tamin’izany ny renim-pianakaviana iray 37 taona manan-janaka roa nanao taingin-droa tamin’ny moto niaraka amin’ny vadiny. Nifandona mafy tamina moto iray hafa nanao taingin-droa izy ireo ka samy naratra ireo mpandeha miisa telo izay samy nalefa avokoa eny amin’ny hopitaly.Henintsoa Hani sy SajoL’article Lozam-pifamoivoizana sesilany RN5, RN7, RN13: olona efatra namoy ny ainy, maro ireo naratra a été récupéré chez Newsmada.
Hisokatra anaty fepetra ny fiangonana katolika
Tapa-kevitra rehefa niato amam-bolana maro. Nambaran’ny arsevekan’Antananarivo, ny Mgr Razanakolona Odon, omaly, fa hiverina hisokatra ny fiangonana katolika eto anivon’ny arsidiosezin’Antananarivo ny alahady izao. Tafiditra ao anatin’ireo hisokatra ny fiangonana rehetra ao amin’ny faritra Itasy sy i Bongolava, amin’ireo diosezy any an-toerana. « Ankinina amin’ny tompon’andraikitra isam-piangonana ny fandaminana rehetra momba izany. Eo ny lafiny fanadiovana sy ny fepetra ara-pahasalamana ary ireo toromarika samihafa, mifandraika amin’izany », hoy izy.Etsy andaniny, hotanterahina ny 14 septambra izao ny tokim-panompoana ho an’ny pretra rehetra eto Antananarivo. Tsy tanteraka izany raha tokony ho natao tamin’ny alakamisy Masina, nialoha ny fetin’ny Paka teo, tahaka ny efa fanao isan-taona noho ny fihibohana.Ankoatra izany, hotanterahina ny 31 oktobra izao kosa ny fanamasinana pretra sy diakra eny Amboara. Ialohavan’ny taratasy fanadihadiana tamin’ireo pretra izany ka manentana azy ireo ny arseveka hanatitra izany ny 14 septambra ho avy izao.Synèse R.L’article Hisokatra anaty fepetra ny fiangonana katolika a été récupéré chez Newsmada.
Krizy sosialy, krizy moraly…
Na ahoana na ahoana, misy fiantraikany mafy sy lalina eo amin’ny fiarahamonina ankapobeny ny fihibohana tamin’ny fahamehana ara-pahasalamana niadiana mivantana tamin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19. Eo, ohatra, ny fahaverezana asa ho an’ny sasany, ny faharavam-pananana noho ny antony isan-karazany ho an’ny hafa…Mitarika sy miteraka krizy moraly izay fahasahiranana izay amin’ny fiatrehana fiainana andavanandro, ny tsy fahazoana antoka ny ho avy… Izay koa ny mahatonga ny krizy moraly mafy sy lalina ary maharitra? Sarotra zohina, sarotra ialana… Mahazo vahana ho azy amin’izany, ohatra, ny samy maka ho azy, ny fifampiahiahiana…Tsy izay krizy moraly izay ve, ohatra, ny fositra sy fototra ny amin’ny hoe fanolanana mahabe resaka etsy sy ero: efa nisy hatramin’izay fa mitady hahazo vahana amin’izao? Na very sy rava ny soatoavina ho an’izay tonga amin’izany. Eny, na ny maha olona aza, tsy hita na tsy misy intsony: tsy manan-javatra hajaina sy atahorana ary mahamentra.Lasa manao ny tsy fanao ny sasany, tsy miraharaha intsony na inona na inona; eny, na ny maha olona azy ihany aza. Vokatry ny fahantrana mafy sy lalina, tafapaka sy tafatsika hatrany amin’ny faralalin’ny atifanahy sy ny toe-tsaina. Tsy ampy na tsy misy ny fanabeazana? Tsy miara-dalana firy amin’ity hoe fandrosoana.Eny, na izay lazaina ho fandrosoana aza no mety ho lasa hadalana na mitondra ny sasany ho amin’izany. Tsy fantatra tsinona izay tena fiaviana, izay antony, izay vokany. Entin’ny fakan-tahaka fotsiny… Nihiboka mbamin’ny saina amam-panahin’ny sasany tamin’ny fahamehana ara-pahasalamana teo ka izao mirongatra amina hadalana izao?Na eo ihany aza ny hoe ny krizy toekarena tsy voavaha no mahatonga ny krizy sosialy, ny krizy sosialy tsy voavaha no mahatonga ny krizy moraly: mila miara-dalana ny famahana ny krizy toekarena, sosialy, moraly. Mety izay krizy moraly aza no maha mafy sy maha sarotra ny fiainana? Na ny fanarenana sy ny fanonerana…Rafaly Nd.L’article Krizy sosialy, krizy moraly… a été récupéré chez Newsmada.
HCDDED: “Mila manara-dalàna na ny mpitondra na ny mpanohitra”
Mafanafana ny toe-draharaha politika amin’izao fotoana izao. Maneho ny fijeriny ny filohan’ny HCDDED fa mila manara-dalàna na ny mpitondra na ny mpanohitra.“Manana rafitra arahina ny demokrasia. Eo ny fanajana izay zava-dehibe. Manara-dalàna koa ny demokrasia. Matetika, eo amin’ny olona tsy manara-dalàna no ipoiran’ny olana. Mila manara-dalàna avokoa na ny mpitondra, na ny entina, na ny mpanohitra.”Io ny nambaran’ny filohan’ny Filankevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny fanjakana tan-dalàna (HCDDED), i Navony Pierre Lenoble, teny amin’ny foibe toeran’ny HCDDED, Soanierana, omaly, manoloana ny toe-draharaham-pirenena amin’izao fotoana izao. Ny lalàna fototra no arahin’ny rehetra. Tsy misy olona ambonin’ny lalàna.Ny tsy fanarahan-dalàna no mahatonga ny korontana amin’ny tany an-dalam-pandrosoana: misy manao hitsin-dalana, maika hanao zavatra. Eo amin’izay fisian’ny sasany manao hitsin-dalana izay no olana amin’izao. “Mikorontana lava eto isika, raha tsy manaja lalàna. Izay no olana amin’ny tany an-dalam-pandrosoana. Ao anatin’izay i Madagasikara“, hoy izy.Tsy misy mahazo tombony amin’ny korontanaAsan’ny mpanohitra ny manohitra; ny mpitondra, mampiseho ny hakingany. Azo atao ny fanoherana fa manara-dalàna. Raha misy olona, omena toerana hahazoany mivory, fa tsy sakanana hoe tsy mahazo mivorivory. Izay no fototry ny demokrasia.Tsy maintsy atao ny fifampiresahana. Mba tsy teny mandratra na manao fihantsiana no ampiasaina. Na mpitondra na ny entina, tsy tokony hampiasa teny fihantsiana. Tsy mahatsara antsika sy ny firenentsika ny korontana. Tsy misy mahazo tombony amin’ny korontana.“Afa-manao “Miara-manonja” sy “Tambatra”, fa atao amim-pifanajana: miteny ny marina sy ny zava-misy, fa tsy zavatra foronina”, hoy kosa izy momba ny famakafakana ny raharaham-pirenena amin’ny haino aman-jery. Tsy mety raha teny mampiady no atao. Rehefa manao politika: akelezo ny fo, alehibiazo ny saina. Mandinika ny dikan’izay, fa tsy entim-po.Akana lesona ny tsy nety teo alohaMisy fototra iaingany ny demokrasia: ny fahafahana miteny sy mivory, ny fahafahana mivavaka… Inona ny demokrasia eo raha tsy mahazo miteny na mivory, ohatra? Amin’izay no ilazana ny zava-tsy mety. Rehefa tonga eo amin’ny fitondrana ny tena, manao demokrasia amin’ny fanorenana sy fanarenana: manatsara izay tsy mety nataon’ny teo aloha. Mahay maka lesona amin’ny lasa. Nisy korontana teto amin’ny firenena tamin’ny 1972, 1991, 2002, 2009. Mbola tsy mahay maka lesona ihany ve isika amin’izany? Tsy haverina intsony izay nampikorontana ny teo aloha.Manampy ny olona amin’ny fametrahana ny demokrasia tena izy eto Madagasikara ny HCDDED, mampihatra ny hoe fanjakana tan-dalàna, fitondrana tsara tantana. “Matoa natsangana ny HCDDED, ny dikan’izay: tsy tonga lafatra ny demokrasiantsika”, hoy ihany izy. Mandainga ny filazana azy hoe tsy misy ny demokrasia eto, saingy tsy tonga lafatra. Noho izay, ahitsy izay ary tenenina. Izay no mahatonga ny olona sasany sahirana rehefa mamoaka hevitra ny HCDDED, lazaina hoe mamono afo na miandany amin’ny mpanohitra. Tsy zakan’ny olona izay.Marina fa manam-petra ny demokrasia, fa tsy hoe mitsahatra amin’ny fitenenana olona iray. Raha misy mpangalatra iray ka voatonontonona: mitsahatra eo ve ny demokrasia na tsy ho tenenina izy? Tsy marina izany.R.Nd.Demokrasia: nivoaka ny lah. 9Nivoaka ny lah. 9, novambra-desambra 2020-janoary 2021, amin’ny gazety-boky Demokrasia novokarin’ny HCDDED. Anisan’ny lahatsoratra amin’izany, ohatra, ny tombana ny asa taona 2020: tsy sakana amin’ny fandraisana sy fikarakarana fitarainana ny valanaretina covid-19. Eo koa ny dinika tamin’ny mpikamban’ny HCCDED, Randrianarivelo Herisoa: “Tsy andrimpanjakana politika ny HCDDED.” Misy koa, ohatra, ny famakafakana fa ny fitsinjaram-pahefana tena izy no vahaolana mety indrindra amin’ny fifehezana ny covid-19. L’article HCDDED: “Mila manara-dalàna na ny mpitondra na ny mpanohitra” a été récupéré chez Newsmada.
“Milalao sy fiarahana”: tohanan’i Morel ara-pitaovana ny Espoir Football Club
“Milalao sy fiarahana”. Anarana hiantsoana ny hetsika karakarain’ny ONG Espoirs d’enfant. Fanangonana “godasse” ho an’ireo tanora mpilalao baolina kitra tezaina sy beazina ao amin’ny Espoir Football Club, manana ny foibeny eto Antananarivo, izany. Ity ivontoeram-piofanana baolina kitra ity, izay tohanan’i Jeremy Morel, vodilaharan’ny Barea de Madagascar sy ny ekipan’ny FC Lorient, “Ligue 1” any Frantsa.Ny fahasahiranan’ireo raiamandreny, mandoa ny latsakembok’ireo katitakely hiditra ao anatin’ny ekipa iray no anton’izao hetsika izao. Raha tsiahivina mantsy, tsy misy afa-tsy 50 Euros na 225.000 Ar isam-bolana ny hany mba vola miditra amin’ny tokantrano malagasy iray ka tsy maharaka ny amin’izany. Eo koa ny mbola vidin’ny fitaovana entina milalao.Teo no nipoiran’ny hetsika, araka ny nambaran’ny ONG Espoirs d’enfant. Nanomboka ny 26 aogositra ka hatramin’ny 5 septambra, ho avy izao ny fanangonana ireo «godasse», izay iarahany miasa amin’ny ligin’ny baolina kitra ao Bretagne, misy klioba miisa 1100. Ankoatra izay, manohana ny hetsika ihany koa ireo tranombarotra goavana any an-toerana. Alefa avy hatrany aty Madagasikara ireo fitaovana ireo, vantany vao voangona ary tsinjaraina amin’ireo kilonga ao amin’ny Espoir FC. Tsiahivina fa ny taona 2016 no nitsangana ity ivontoerana ity, ka saika ankizy avy eny ambany tanàna ny ankamaroan’ny mpilalao ao. TompondakaL’article “Milalao sy fiarahana”: tohanan’i Morel ara-pitaovana ny Espoir Football Club a été récupéré chez Newsmada.
Kaontera nipoaka… May avokoa ny entana rehetra
Nitrangana hain-trano teny amin’ny fokontany Manjaka Ilafy, omaly tokony ho tamin’ny 11 ora antoandro. May tamin’izany ny trano lehibe iray teny an-toerana. Vokany, tsy nisy avotra ny entana rehetra tao amin’ireo efitra miisa dimy tao ambony rihana nanombohan’ny loza. “Nisy kaontera nipoaka tao amin’ilay trano tamin’io fotoana io ary iny no nahatonga ny fahamaizana. Sarotra nidirana tao amin’ireo efitra vokatry ny afo efa nijoalajoala ka tsy afaka namoaka ireo entana intsony izahay”, hoy ny fanazavan’ireo mponina teo an-toerana. Nohamafisiny fa tsy nisy nandray antso ireo mpamonjy voina ka voatery nampandre ny tranga mihitsy ny sefo fokontany teny an-toerana.Nahazo antso mahakasika ny loza ny sampana mpamonjy voina tokony ho tamin’ny 1 ora ka nidina teny an-toerana, nanampy azy ireo koa ny avy etsy Tsaralalana. “Kaontera nipoaka ny nahatonga ny loza ka ireo pitik’afo no nahavoa ny gorodona tao ambony no nahazo ireo efitra sasany tao ambany rihana”, hoy ny fanazavan’ireo mpamono afo. Araka izany, tsy avotra ny entana rehetra tao amin’ny rihana ambony, niatombohan’ny afo raha tafavoaka mialoha kosa ny ampahany tamin’ireo entana tao ambany rihana. Vokany, naharitra ora roa teo ny famonoana ny afo ary maty tanteraka izany tokony ho tamin’ny 03 ora tolakandro.Tsaboina eny amin’ny hopitaly ny tompon-trano taorian’ny nandresena ny loza.Henintsoa HaniL’article Kaontera nipoaka… May avokoa ny entana rehetra a été récupéré chez Newsmada.